४ वर्षपछि न्यू–खिम्ती सबस्टेसनको काम सुरु, तामाकोसी–खिम्ती विद्युत् हब बन्ने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
४ वर्षपछि न्यू–खिम्ती सबस्टेसनको काम सुरु, तामाकोसी–खिम्ती विद्युत् हब बन्ने
मङि्सर १५, २०७४ 2785 सागर केसी/दोलखा
विद्युत् हब बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सहित अघि बढाइएको न्यू–खिम्ती सब–स्टेसन निर्माणको काम ४ वर्षपछि सुरु भएको छ । स्थानीय समस्या समाधानपछि काम सुरु हुन लागेको हो ।
रामेछापको फुलासीमा सबस्टेसन निर्माण हुने जग्गाको मुआब्जा अधिकांश स्थानीयले बुझिसकेका छन् । सबस्टेसन निर्माणपछि पहिलो चरणमा बहुप्रतिक्षित ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् जोडिनेछ । सबस्टेसनको काम आयोजनाले नै सुरु गरेको छ ।
काम सुरु नहुँदा तामाकोसीको विद्युत् खेर जाने सम्भावना थियो । तर, अब त्यो चिन्ता कम भएको आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपनाले बताए । ‘सबस्टेसन निर्माण गर्न बुधबारबाटै काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘रामेछापको साविक फुलासी गाविस वडा नं. १ साँखेमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण हुनेछ ।’
‘एक वर्षभित्र सबस्टेसन तयार हुने गरी कामलाई तीव्रता दिइने पनि न्यौपानेले बताए । लामो समयदेखि स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा नबुझ्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । सबस्टेसनमा दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगामा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् जोडिनेछ ।
तामाकोसीबाट २०७५ पुससम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाको काम अब ८ प्रतिशतमात्र बाँकी छ । उत्पादित विद्युत् न्यू–खिम्तीमा जोडेर काठमाडौं र तराईसम्म पुर्याउने योजना छ ।
विद्युत् प्रसारण गर्न गोंगर–फुलासी ४७ किलोमिटर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम पनि तीव्ररूपमा भइरहेको छ । लाइन आगामी चैतसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
सबस्टेसन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी थियो । ४ वर्षदेखि १ सय ३७ रोपनी जग्गा रोक्का राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकनसहित सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेको थियो ।
एक वर्षअघि धेरैजसो सथानीयले मुआब्जा बुझेका थिए । तर, १४ जनाले नबुझ्दा ६५ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको थिएन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको जग्गा मूल्यांकन समितिले सरकारी र स्थानीय चलन चल्तीको मूल्य मिलाएर प्रतिरोपनी ५ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको थियो ।
समितिले पाखोबारी ५ लाख रुपैयाँ खेतीयोग्य जग्गा ७ लाख, फुलासी पोखरी जाने सडकछेउ जग्गा ८ लाख र मुख्य सडकछेउको जग्गाको मूल्य १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । पुरानो मूल्यांकनसमेत आयोजनाले छलफल गरेको थियो ।
तामाकोसी करिडोरमा उत्पादन हुने विद्युत् जोड्ने योजनाअनुसार फुलासीमा ठूलो सवस्टेसन निर्माण हुनेछ । दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा बन्ने आयोजनाको विद्युत् पनि यही सस्टेसनमा जोडिनेछ ।